शिक्षा Archives - Darsan Post
३० चैत्र २०७७, सोमबार १०:०४ Dpost284LeaveaComment on उच्च जोखिममा विद्यालय, मास्क पनि साटासाट !
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल एक साताअघि काठमाडौंको एक स्कुलमा पुगे। उनी साना बालबालिकामा पनि कोभिड संक्रमण देखिएपछि छड्के अनुगमनमा स्कुलमा पुगेका थिए। बराल सिसिएमसी समितिका संयोजक पनि हुन्। पूरा समाचार यहाबाट
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १९:०८ Dpost216LeaveaComment on शिक्षकका व्यथा र आलोचना
कोभिड–१९ को महामारीबाट मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित छ । त्यसमा पनि २०७६ सालको चैत ११ देखि मुलुकमा भएको लकडाउनले सबैभन्दा बढ्ता प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र नै देखिएको छ । स्वभावैले विद्यालय क्षेत्र बढी भीडभाड हुने स्थान हो । तसर्थ वातावरण सहज नबनुन्जेलसम्म विद्यालय बन्द गर्न, पठनपाठन, परीक्षालगायतका कार्यक्रमहरू नगर्न/नगराउन पटक–पटक सरकारले उर्दी जारी गरिरहेको छ […]
‘माइ सेकेण्ड टिचर’ बैशाख १ मा आउने
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ११:३७ Dpost91LeaveaComment on ‘माइ सेकेण्ड टिचर’ बैशाख १ मा आउने
काठमाडौं, चैत । नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याउने दाबी सहित इन्नोभेट टेकले इ-लर्निङ्ग प्ल्याटफर्म माइ सेकेण्ड टिचर ल्याउने भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी इन्नोभेट… पूरा समाचार पढनुहोस
अक्षर नराम्रो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस अक्षर सुधार्ने ८ तरिका
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ११:२९ Dpost358LeaveaComment on अक्षर नराम्रो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस अक्षर सुधार्ने ८ तरिका
एजेन्सी । झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्ने अक्षर नियमले सही नहुन सक्छ । हरेक खालका अक्षरको उत्कृष्ट लेखाइका लागि केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ती यसप्रकार छन् जस्तै : १) अक्षर स्पष्ट र सबैले बुझ्ने … पूरा समाचार पढनुहोस
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार १९:३६ Dpost559LeaveaComment on त्रिविको ४६औँ दीक्षान्तका लागि आवेदन खुल्यो
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ४६औँ दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनका लागि विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको छ । त्रिविले सूचना प्रकाशित गरी समारोहमा इच्छुक विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको हो । पुस महिनामा हुने समारोहमा सहभागी हुन २०७६ साल असार १ गतेदेखि २०७७ जेठ ३२ गतेसम्म सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तह र एमफिल तह उत्तीर्ण गरी […]
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार १८:२९ Dpost771LeaveaComment on विद्यालयमा दिइने दण्डको सही समाधान कसरी गर्ने
नवराज क्षितिज । दण्ड भन्नेबितिकै हाम्रो दिमागमा लौरो, पिटाई, थप्पड, हत्कडी आदि आउँछ । गृहकार्य नगरेको विद्यार्थीले पिटाई खानु, भनेको नमान्दा थप्पड भेट्नु वा अपराधीलाई हत्कडी लगाएर जेल लैजानु आदिले दण्डाई बुझाउँदै आएको छ । मूलत ः यसको रुप शारीरिक हुन्छ भनिन्छ तर दण्ड शारीरिक मात्र हुदैन मानसिक पनि हुन्छ । गालीगलौच, मानहानी, डर, त्रास […]
कक्षा १२ का प्रश्नपत्र पुरानै शैलीमा
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १९:०९ Dpost514LeaveaComment on कक्षा १२ का प्रश्नपत्र पुरानै शैलीमा
कक्षा १२ को परीक्षामा पुरानै तरिकाअनुसार प्रश्न सोधिने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले पुरानै ढाँचाका प्रश्नपत्र तयार गरिने बताउँदै भने, “नयाँ मोडेलको प्रश्नपत्र तयार हुँदैन । प्रश्नको मोडेल पुरानै रहन्छ, प्रश्न सङ्ख्या मात्र घट्ने ।” परीक्षालाई डेढ घण्टा बनाइएकाले प्रश्न सङ्ख्या पनि कम हुनेछन् । “उदाहरणका लागि संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् […]
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:०४ Dpost237LeaveaComment on कक्षा १२ को परीक्षा डेढ घण्टे, कोभिड संक्रमितका लागि पछि हुने
स्थगित भएको सात महिना पछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षाको रुटिन सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिर ९ गते देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले बुधबार रुटिन सार्वजनिक गरेको हो । परीक्षा बिहान ८ बजे देखि साढे ९ बजे सम्म डेढ घण्टा मात्रै हुने छ । गत बैशाख २१ गतेका लागि तोकिएको […]
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:१० Dpost271LeaveaComment on कसरी गर्ने परीक्षाको तयारी ?
कसरी राम्रो नतिजा हासिल गर्ने ? अक्सर बिद्यार्थीको ध्याउन्न यहिं हुने गर्छ । एक हिसावले यो सहि पनि हो । तर, नतिजाको दौडमा लाग्दा त्यसले तनाव निम्त्याउँछ, जो परीक्षाको बेला प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । परीक्षाको बेला तनावमुक्त हुनुपर्छ । पढेको कुरा पुनःस्मरण गर्नुपर्छ । तर, ‘टुप्पि कसेर’, ‘घुँडा धसेर’ किताब घोक्नु सहि बिधी होइन । […]
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:४२ Dpost512LeaveaComment on गणितमा अधिकांश विद्यार्थीहरु असफल हुनुका कारण र समाधानका उपायहरु
गणित अंकहरुको विज्ञान हो । वर्तमान परिवेशमा गणित केवल अंकहरुको विज्ञान मात्र होइन यो त मानव जीवन हो । जीवनको हरेक पलसँग गणित जोडिएको छ । हरेक विषयको विषयगत ज्ञान गणितको अध्ययन विना पूरा हुदैन । त्यसैले भनिन्छ गणित शिक्षाको मूल जरा हो । गणितीय ज्ञान विना कुनै पनि ज्ञान संभव छैन । मानव जीवनको […]